गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित ! « Onlinetvnepal.com
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित !
Published : 8 February, 2019 12:23 pm
अमेरिकाको अलाबामामा बस्ने कायला राहनको पेट बढ्दै जान थाल्यो र तौल पनि । धेरैले उनी गर्भवती भएको भन्दै बधाई पनि दिए र कतिपयले त पेट निकै बढ्न थालेको देखेर कायलाको पेटमा जुम्ल्याहा या तिम्ल्याहा बच्चा भएको अनुमान समेत लगाउने गर्दथे ।
पछिल्लो मे महिनामा उनको पेटबाट उक्त ट्युमर सफलतापूर्वक निकालिएको छ । काइलाका अनुसार उनको पेट बढ्दै जाँदा कतिपय मानिसले उनको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा हुनसक्ने अनुमान लगाउने गर्दथे ।
तर अलाबामाको ज्याक्सन अस्पतालका डाक्टरहरूले यो ‘म्यूकिनस सिस्टाडेनोमा’ रहेको पत्ता लगाए । यो अन्डाशयमा हुने एक प्रकारको ट्युमर हो । अपरेसनपछि काइलाको शरीरबाट ट्युमर हताइएको छ र यसले उनको तौल लगभग ३४ किलो घटेको छ ।